Yuusuf Garaad oo ka soo dhex muuqday Shir Beeleed markii ugu horaysay. – Hornafrik Media Network
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia, Yuusuf Garaad ayaa Maanta ka soo dhex muuqday Maanta Shir Beeleed dhacay Hotelka Jaziira oo uu isugu yeeray Beesha uu matalo. Waxaana uu Wasiirka kala hadlayaa Beesha sidii ay u taageeri lahaayeen Dawladda Somalia.
Shirkan ayuu ku casuumay Wasiirku Waxgaradka, Dhalinyaradda iyo Haweenka Beesha, iyadoo aysan ka soo qayb galin Shirka Xildhibaanadda Beesha. Waxaana uu Wasiirku shirkan u qaban qaabiyay kadib cadaadis kaga yimid Beesha uu ka soo jeedo oo ku dooday inuusan Siyaasad ahaan matalin.
Yusuf Garaad oo ka hadlaya Kulanka uu la yeeshay Waxgaradka Beeshiisa
Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan u kala diray Wasiiradda Xukuumadiisa inay taageero kala yimaadaan beelaha ay matalaan oo diidan Dawladda Somalia. Waxaana horay sidan oo kale Beeshiisa ula kulmay Wasiirka Amniga oo kala hadlay inay taageeraan Dawladda Somalia.
Kulamadda iyo Xodxodashadda Beelaha ee Wasiiradda Xukuumadda ayaa imaanaya xilli ay maalmo uun ka horsan yihiin Furitaanka Kalfadhiga Baarlamaanka oo la hadal hayo in Ajandayaasha Miiska saaran ay ka mid tahay in Kalsoonidda lagala laabto Xukuumadda uu hogaamiyo Raiisul Wasaare Khayre.
lama ogga waxay Kulamadan ka badali karaan Dareenka Xildhibaanadda oo saluugsan habka Beelaha wax loogu qaybiyay.